I-ArtRage 6 ifika ngenjongo yokubonelela ngamava okwenene okupenda | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IArtRage 6 ifika ngenjongo yokubonelela ngamava okwenene okupenda
IArtRage 6 ifika neenjongo ezicacileyo zokuba sisixhobo elixelisa ngokwenyani la mava awodwa sinawo xa sithatha ibrashi esandleni sethu kwaye siyibeka ukuba ifakwe i-acrylic kwi-canvas.
Kuhlobo lweArtRage 6 isixhobo iinketho zebrashi ephuculweyo kunye nezinye izinto ezinceda amagcisa edijithali ukuba abe nolawulo olukhulu kunye nokuguquguquka kwimisebenzi yabo yedijithali.
Xa siyazi ukuba in Inqanaba le-beta ye-Adobe Fresco yabucala, kwaye ufuna ukunikela ngantoni amava awodwa okupenda Kwi-canvas, i-ArtRage 6, enye yezona zinto zintle zokuzoba kunye nokupeyinta ii-iPad, ii-macOS kunye neeWindows, isungule iinketho ze-Brush yesiqhelo ukwenza imvakalelo yokwenyani xa upeyinta kwithebhulethi efana neka-Apple.
Nokuba ukhetho lwe ukungenisa iibrashi zebmmap zeFotohop Kwisixhobo seArtRage 6 esiqhelekileyo seBrush.Kodwa asihlali apha kuphela, kodwa uluhlu olukhulu lokuzoba kunye nezixhobo zokupeyinta zibandakanyiwe, kunye nezinye izixhobo eziza kwenza kube lula ukuzalisa ngemibala, ukuhlela iigradients kwaye ukhethe izinto.
Idibanise zonke izakhono ze ArtRage 5, ArtRage Lite kunye neArtRage Mobile ngazo zonke ezo ndaba zithethiweyo. Enye yezinto eziphuculweyo kukusetyenziswa kwenjini yeScripting kunye neZenzo. Sele sizazi zisuka kwiAdobe Photoshop ukuphinda iinkqubo eziphindaphindiweyo esizirekhodile ngaphambili.
IArtRage 6 iba yiyo yonke usetyenziso lomzekeliso wedijithali kwi-iPad, i-MacOS kunye nePC nge Windows 7 okanye ngaphezulu ngexabiso elihlala kuma-euro angama-84,47. Isixhobo esinomdla esihamba kunye nezo Ukudibana okuze noluhlobo olukhulu Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » IArtRage 6 ifika ngenjongo yokubonelela ngamava okwenene okupenda
Ezona webhusayithi zintle ukufuna inkuthazo
Susa umntu (okanye into) kwifoto kunye ne-Photoshop